टिमिसोआरा, रोमानियाई आकर्षणको साथ यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | के हेर्ने, रोमानिया
पूर्वी युरोप यो भाग्यको आकर्षण हो। शताब्दियौं इतिहास र राजनैतिक प्रणालीहरूले आफ्नो छाप छोडे र त्यहाँ शहरहरू छन् जुन अविश्वसनीय सुन्दर छन्। उदाहरण को लागी, टिमिसोआरा, रोमानियामा.
तिमोसरा यो देशको तेस्रो ठूलो शहर हो र पश्चिमी रोमानिया मा एक प्रमुख केन्द्र। हामी यसलाई आज किन हेर्दछौं किन यो जानिन्छ सानो भियना वा फूलहरूको शहर।..
2 टिमिसोआरा पर्यटन
नाम हंगेरीबाट आएको हो र पहिलो बस्तीहरू समयमै फिर्ता जान्छन्, यहाँसम्म कि रोमीहरूलाई पनि। त्यसपछि यो मध्य युगमा हुन्छ, हंगेरीको चार्ल्स I द्वारा निर्मित किलेको वरपर, र यो हुन जानिन्छ क्रिश्चियनहरू र ओटोम्यान टर्कहरू बीचको युद्धको समयमा, एक सीमा शहरलाई त्यसकारण यसले डेढ शताब्दी भन्दा बढी समयसम्म ओटोम्यानको हातमा नलागेसम्म यसमाथि धेरै घेरा र हमला भयो।
तिमिसोआरालाई सभोयका प्रिन्स युजीनले १ Prince१1716 मा पुनः कब्जा गरे र २० औं शताब्दीको सुरूसम्म हब्सवर्गको हातमा रहे। पहिलो विश्व युद्ध पछि हंगेरीले त्यो शहर रोमानियामा पुर्यायो, र दोस्रो विश्व युद्ध को समयमा यो धेरै क्षति भयो। अन्तमा, सोवियत कक्षा अन्तर्गत आए, यसको जनसंख्या बढ्यो र यो औद्योगिकिकरण भयो।
सहर बनतको मैदानमा छ, तिमीस र बेगा नदीहरूको अलगको नजिक। यहाँ एक दलदल छ र शहर लामो समयको लागि केवल पोइन्ट मात्र थियो जहाँ तपाईं त्यो क्षेत्र पार गर्न सक्नुहुन्थ्यो।
वास्तवमा यसले एक प्रतिरक्षाको रूपमा पनि काम गर्‍यो, यद्यपि धेरै ओसको निकटताले यसमा धेरै कीराहरू ल्यायो। १ XNUMX औं शताब्दीमा, सार्वजनिक कार्यहरूको लागि धन्यवाद, शहर बेमी नहरमा बन्न थाल्यो, तिमीस नदीमा होइन, तब सबै सुधार भयो।
परम्परागत रूपमा यो निर्माण, शिक्षा, पर्यटन र वाणिज्यलाई समर्पित शहर भएको छ। आज यो एक छ यातायात प्रणाली सात ट्राम लाइनहरू, आठ ट्राली बसहरू र बीस भन्दा बढी बस लाइनहरूको साथ। पनि त्यहाँ सार्वजनिक साइकल छन् २ stations स्टेशनहरू र b०० बाइकहरू सहित जुन दुबै स्थानीयहरू र पर्यटकहरूद्वारा नि: शुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ, र त्यहाँ छ भ्यापुरटो त्यो च्यानल नेभिगेट गर्दछ। सार्वजनिक पनि।
शहरमा अन्य यूरोपीय शहरहरू जत्तिकै संग्रहालयहरू छैनन्, तर यदि तपाईं सांस्कृतिक बग हुनुहुन्न भने तपाईंलाई दिनभर संग्रहालयहरू र ग्यालरीहरू भ्रमण नगर्नुको विचार मनपर्न सक्छ। त्यसो भए, Timisoara हामीलाई एक प्रस्ताव गर्दछ मुट्ठीभर रोचक संग्रहालयहरू:
el तिमिसोआरा कला संग्रहालय यो युनिरी स्क्वायरमा छ र यो १ 10 औं शताब्दीको भवन हो। त्यहाँ स्थानीय, समकालीन, सजावटी कला, चित्र र नक्काशी र युरोपेली कला सामान्य छ र सामान्यतया प्रदर्शन र घटनाहरु छन्। प्रवेश लागत RON 10 छ र मंगलबार देखि आइतबार बिहान १० देखि साँझ6सम्म खुल्छ।
el बनत राष्ट्रिय संग्रहालय यो क्षेत्रको प्रतिनिधि हो। यो शहरको बीचमा, Huniade महलमा काम गर्दछ, शहरको सब भन्दा पुरानो भवनमा। त्यहाँ धेरै विभागहरू छन्: पुरातत्व, इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान र साथै Traian Vuia संग्रहालय, उही उही नामको रोमानियाली अन्वेषकलाई, समर्पण उड्डयनको अग्रगामी।
el गाउँ संग्रहालय यो टिमिसोराको बाहिरी छेउमा, एक धेरै हरियो क्षेत्र मा र एक वास्तविक गाउँ के हो राम्रोसँग झल्काउँछ। यससँग धेरै भवनहरू छन्, एउटा चर्च र मिल, सबै परम्परागत र शैलीहरूसँग जुन विभिन्न समयमा र बनतमा क्षेत्रहरू छन्। यो राम्रो पैदल यात्रा हो र यो चिडियाखानाको नजिक छ ताकि तपाईं दुबै ठाउँहरू भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं बस बाट आइपुग्नुहुन्छ र प्रवेश लागत R RON छ। यो गर्मी र जाडो को घण्टा छ।
el कम्युनिष्ट उपभोक्ता संग्रहालय यो परम्परागत छैन। यो एक दुर्लभ संग्रहालय हो कि शहर को कम्युनिष्ट युग को ठीक प्रतिबिम्बित गर्दछ। यो Scart बार को बेसमेन्ट मा काम गर्दछ, एक ठूलो बगैचा संग एक पुरानो घर मा। यो एक मैत्रीपूर्ण जगह हो जहाँ सजावटले सजाइएको छ। संग्रहालयको स्ग्रहमा यो सबै छ र साथीहरू र आगन्तुकहरूको अनुदानबाट गठन गरिएको थियो। कम्युनिष्ट युगसँग सम्बन्धित सबै कुरा। तपाई यसलाई Szekely Laszlo 1 Arh मा पाउनुहुन्छ।
el क्रान्तिको स्मारक १ the dis remember याद गर्नुहोस् जब सोभियत संघ बिघटन भयो। रोमानिया मा क्रान्ति यहाँ टिमिसोआरा मा शुरू भयो र शहर मा एक ब्राण्ड हो। यो साइट अस्थायी हो र केहि बिंदु मा यसको बारेमा एक संग्रहालय हुनेछ मानिन्छ। स्मारक Calle Popa Sapca, 1989-3-। मा छ र प्रवेशद्वारको लागत १० RON छ। यो सोमबार देखि शुक्रवार सम्म खुल्दछ, बिहान4देखि अपराह्न 10 र शनिबार बिहान to देखि अपरान्ह २ सम्म।
जस्तो कि तपाईंले देख्नुहुन्छ, त्यहाँ केही संग्रहालयहरू छन् त्यसैले त्यहाँ अन्य प्रकारका भ्रमणहरूको लागि प्रशस्त समय छ। टिमिसोआरा एक महान शहर हो जसको इतिहास कम्तिमा १ XNUMX औं शताब्दीमा भएको थियो यसका सडकहरूमा हिँड्नुहोस् यो आकर्षण हो।
तसर्थ, पहिलो भ्रमणमा तपाईंले विशेष बिन्दुहरू छुटाउनु हुँदैन। अर्थात्, संघ वर्गजुन शहरको सब भन्दा पुरानो हो। यसको नाम पहिलो विश्वयुद्ध पछि १ 1919 १। को हो, शहरमा प्रवेश गरेपछि रोमानियाली सेनाहरू यहाँ सामूहिक रूपमा सामेल भए।
छ बारोक एयर र यसका वरिपरिका भवनहरू सर्बियाई अर्थोडक्स चर्च, रोमन क्याथोलिक चर्च, ब्रूक हाउस र बारोक प्यालेस हुन्। सबै धेरै राम्रो। त्यहाँ क्याफेहरू पनि छन्, त्यसैले ग्रीष्म sitतुमा बस्न र मान्छे-हेर्नका लागि धेरै रमाइलो हुन्छ। अर्को चाखलाग्दो वर्ग हो भिक्टोरिया स्क्वायरजसलाई ओपेरा स्क्वायर पनि भनिन्छ। नयाँ नाम साम्यवादको पतन पछि हो।
वर्ग दुई प्रतीकात्मक भवनहरु द्वारा flanked छ: अर्थोडक्स क्याथेड्रल दक्षिण पक्ष र बाट राष्ट्रीय थिएटर उत्तर तर्फबाट। यो २० औं शताब्दीमा पुरानो मध्यकालीन गढीलाई बदल्नको लागि निर्माण गरिएको हो, त्यसैले यसमा एक आर्ट-नोव्यू भावना छ र यसको उद्देश्य छ पसल, क्याफे र टेरेसहरू सहित। यदि तपाईं क्रिसमसमा जानुहुन्छ, त्यहाँ क्रिसमस बजार छ।
अर्को महान सवारी हो बेगा नदीको किनारमा हिंड्नुहोस्। वा बाइक टुर गर्नुहोस्। यो एक घमाइलो दिनमा उत्तम छ र तपाईं शहरको अन्त्यबाट शहरको अन्त्यसम्म जान सक्नुहुनेछ, यसको मुख्य पार्कहरू पार गरेर। गर्मी याममा त्यहाँ धेरै टेरेसहरू छन् जहाँ तपाईं चिसो बियरको मजा लिन सक्नुहुन्छ र जब घाम लाग्छ यो पनि एक धेरै लोकप्रिय ठाउँ हो।
अन्तमा, म शहरहरूमा उडान गर्न मन पराउँछु र यहाँ तपाईं यो विमानबाट गर्न सक्नुहुन्छ। उडान आधा घण्टा हो र around 75 यूरोको लागत। र यदि जब घाम अस्ताउँछ तपाईं बाहिर जान र मान्छेहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, भाग्यले शहर एक छ सक्रिय रात्रि जीवन। एक अति प्रसिद्ध साइट हो डी'अार्क, युनिरी स्क्वायरमा। राम्रो संगीत, मध्यम मूल्यहरू, विदेशीहरू र एक्सप्याट्समा लोकप्रिय। भाग्यवस यो ढिलो खुल्छ, दिउँसो ११ देखि बिहान from सम्म।
अर्को रात स्पट छ रिफ्लेकटर, जुन २०१ 2017 मा खोलियो, कन्सर्ट हल। 'S० को पब यो टिमिसोरामा धेरै पबहरू मध्ये एक हो जहाँ तपाईं पिए पनि, नाच्न सक्नुहुन्छ। यो केन्द्रमा छैन, तर यदि तपाईं 80० को दशकबाट हुनुहुन्छ भने यो विश्वविद्यालय क्याम्पस भ्रमण गर्न लायक छ। ताइन र एस्केप अन्य स्थानहरू छन् नृत्य र रमाईलो गर्न।
के तपाईलाई टिमिसोआरा मन पर्यो? यो एक पहुँच योग्य गन्तव्य हो (बियरको मूल्य १.२ur युरो हुन्छ, खाजा १०), यो बुडापेस्ट र बेलग्रेडबाट तीन घण्टा र भियनाबाट पाँच घण्टा नजिक छ।
यो एउटा सहर हो प्रेम संस्कृति, फिल्म र थिएटर उत्सव, छ राम्रो gastronomy र मान्छे राम्रो छन् र बहुसांस्कृतिक। यसको वास्तुकला सुन्दर छ, यसको इतिहास छ, यसमा नाइट लाइफ छ, मानिसहरूले प्रायः अ English्ग्रेजी बोल्छन् र ऐतिहासिक तथ्यका रूपमा तिमिसोवारा कम्युनिष्टको पतन पछि आफूलाई स्वतन्त्र गर्ने पहिलो शहर थियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » रोमानिया » टिमिसोआरा, रोमानियाई आकर्षणको साथ